करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन् | Tsem Rinpoche
कमिकहरू कसलाई मन पर्दैन र? कमिकहरू धेरै तरिकाले गजब हुन्छन् – यी एक कथा भन्ने गजबका तरिका हुन्, यी कलात्मक अभिव्यक्तिका सुन्दर रुप हुन्, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कमिकहरूले गजबको मनोरञ्जन दिलाउँछन्! विश्वमा धेरै मानिस छैनन् जसले कमिकहरू देखेका हुँदैनन् – र लगभग सबैको प्रिय कमिक हुन्छ, चाहे त्यो सुपरहिरो कमिक शृंखला होस् वा पत्रिकामा भएका हाँस्य पट्टिहरू हुन्। मूलत: यी हस्त-चित्रण गरिएका कथाहरूमा आँखा पर्नेहरूको कल्पना र मनलाई तान्ने एक किसिमको तरिका यिनमा हुन्छ।
उदाहरणका लागि, एक पटक पिनट्स कमिक स्ट्रिपका रचनाकार चार्ल्स एम. सुल्जले यी ‘केहीको बारेमा होइनन्’ र केवल ‘साना घटनाहरूले’ बनेका हुन् भनेका थिए, तर सन् १९५० अक्टोबर २मा सुरु गरिएका यी कमिक स्ट्रिपले जीवनका उतारचढावलाई यसरी चित्रण गरे कि यिनले मानिसहरू, संस्कार र समाजमा गहन प्रभाव पारे।
पिनट्सको चित्रण २२.०९.६३। तस्विर: पिनट्स वर्ल्डवाइड। ठूलो पार्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
कमिकहरूसँग हाम्रो भेट साना हुँदा भए पनि, कमिकहरू र यिनका पात्रहरू हामीसँग सम्पूर्ण जीवनभर रहिरहन्छन्। र हामीहरू धेरै जस्तै, छेम रिन्पोछेलाई पनि कमिकहरू निकै मनपर्छ। जब रिन्पोछेले होवेल, न्यू जर्सीमा, हुर्कँदै गर्दाको आफ्ना बाल्यकालको सम्झना गर्नुहुन्छ, उहाँका सबैभन्दा प्यारा सम्झनाहरू भनेको छिमेकको किराना पसलको कमिक बक्साबाट आफ्नो अडप्टिभ आमासँग नयाँ कमिकहरू लिनु थियो। रिन्पोछेले अनुरागसहित सम्झिनुहुन्छ,
“साँझमा, मैले मेरी आमालाई चिया बनाएर दिन्थेँ, त्यसपछि हामी सँगै हाम्रा कमिकहरू पढ्थ्यौँ। उहाँ खाटमा आफ्नो कमिकहरू पद्नुहुन्थ्यो, र म उहाँको छेउमा भुइँमा बसेर आफ्नो पढ्थेँ।”
भारतमा भिक्षु बन्न गएपछि र गादेन शार्त्से गुम्बासँग आबद्ध भएपछि, रिन्पोछेले भारतको सबैभन्दा ठूलो र प्रख्यात कमिक पुस्तक प्रकाशन — अमर चित्र कथाले — कसरी जटिल हिन्दु र बौद्ध जीवनी, कथा र महाकाव्यहरूलाई सबैले बुझ्न सक्ने कमिकमा ढालेका छन् भन्ने देख्नुभयो। अमर चित्र कथाका कमिकहरू सन् १९६०को दशक देखि सुरु भएका हुन् र सम्पूर्ण भारतभर, ठूला किताब पसलहरू देखि सडकछेउका ठेलाहरूमा पाइन्छन्। यी कमिकहरूको प्रख्याति देखेर, रिन्पोछेलाई सधैँ अमर चित्र कथाको शैलीमा सबैका लागि उपलब्ध हुने दोर्जे शुग्देन कमिकहरू बनाउने इच्छा थियो।
छेम रिन्पोछेलाई कमिकहरू पढ्न मात्र नभइ कहिलेकाहिँ समय भएको विरल अवसरमा कमिक बनाउन पनि मनपर्छ। ठूलो पार्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
“कमिकहरू भारि मोटो किताब होइनन् जसले मानिसहरूलाई तर्साएर धपाउन सक्छन्, त्यसैले यी सरल, बुझ्न सजिलो र मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट मानिसहरूलाई गहन धर्म र दोर्जे शुग्देनसम्म ल्याउने उत्तम शैक्षिक माध्यम हुन्।” ~ छेम रिन्पोछे
आकर्षक चित्रण र संक्षिप्त बोली फोहराहरू भएकाले, कमिक पुस्तकहरू निकै सिधा र शक्तिशाली सञ्चारका माध्यम बनेका छन्। रिन्पोछेले सधैँ कमिकहरूको यो पक्ष निकै मनपराउनुभएको छ, र त्यसैले केचाराको प्रकाशन अंग, केचारा मिडिया & पब्लिकेसनले बेला-बेलामा मौलिक कमिकहरू रचना गर्दै आएको छ। लामा चोंखापाको जीवन कथा चित्रण अँग्रेजी र चिनियाँ भाषामा सन् २००९ देखि प्रकाशन भएको हो!
लामा चोंखापाको जीवन कथा कमिकमा सन् २००९ मा प्रकाशित भएको थियो, र निकै प्रख्यात दोर्जे शुग्देन ग्राफिक उपन्यास सन् २०११ मा आएको थियो। ठूलो पार्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
माननीय छेम रिन्पोछेको संकल्पमा आधारित भएर, केचाराले केचारा कमिक्सको प्रारम्भबाट कमिक कथा प्रस्तुतिलाई अर्को श्रेणीमा लैजाँदैछ। भारतको अमर चित्र कथाबाट प्रेरित, केचारा कमिक्सले प्रेरणादायक र मन छुने कथाहरूलाई सरल र रमाइलो ढंगमा जीवन प्रदान गर्दछ। पारम्परिक लोक कथाहरू देखि विगतका बौद्ध गुरुहरूको जीवनीहरूसम्म र आध्यात्मिकताको माध्यमबाट नयाँ अर्थ र उद्देश्य पाएका मानिसहरूको सत्य-घटनाहरू पाइने, केचारा कमिक्स सबै उमेरका व्यक्तिहरूका लागि हो।
हाम्रो दयालु प्रायोजकहरूका कारणले हाम्रो कमिकहरू धेरैजसो प्रिन्ट तथा डिजिटल दुबै रुपमा नि:शुल्क बाँड्ने गर्छौँ। त्यसैले यस ब्लगमा नयाँ प्रकाशनहरू पढ्नका लागि आउने गर्नुहोस्। हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईंलाई यी कथाहरूबाट आनन्द प्राप्त होस् र बौद्ध मार्गले तपाईंलाई कसरी आन्तरिक शान्ति, प्रेम, बुद्धि र खुशीको विकास गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने कुरा तपाईंले पनि पत्ता लगाउन सक्नुहोस्।
केचारा कमिक्सले प्रकाशन गरेको पहिलो शिर्षक करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन् हो। करुणा र एडम हाइ-स्कुल देखिका जोडी हुन् जसको यस्तो जीवन थियो कि कसैले सपनाको जीवन भन्थे। सबै कुरा राम्रै चलिरहेको थियो जब एकदिन वास्तविकता उनीहरूको ढोकामा ढकढकाउन आइपुग्यो। अकस्मात एक ठगीमा परेर, कहिल्यै कसैलाई हानि नपुर्याएको यो माया भरिएको परिवारले दुर्भाग्यबाट गुज्रिनु पर्यो। आफ्नो परिवारलाई बचाउन दृढ करुणाले कुनै बाटो पत्ता लगाउन सक्नेजति सबै गर्छिन्।
सम्पूर्ण कमिक तल पढ्नुहोस् वा पीडीएफ डाउनलोड गरेर आफ्नो समयमा पढ्नुहोस्। आफ्ना साथीहरूसँग पनि बाँड्नुहोस्, यो सबै नि: शुल्क छ!
‘करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्’ फ्लिपबुक शैलीमा पढ्नुहोस्
एरो किहरू, एरो बटनहरू वा क्लिक र ड्रयाग गरेर एउटा पेजबाट अर्कोमा जानुहोस्।
जूम बटन प्रयोग गरेर कुनै पेजमा जुम इन वा आउट गर्नुहोस्
उत्तम दृश्य अनुभवको लागि, फुल स्क्रिन मोड प्रयोग गर्नुहोस्।
आफ्ना साथीहरूलाई बाँड्नुहोस्!
‘करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्’ ग्यालरी शैलीमा पढ्नुहोस्
केचारा कमिक्सलाई सहयोग गर्नुहोस्!
हामीलाई आशा छ तपाईंलाई ‘करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्’ पढ्न रमाइलो लाग्यो।
ठूलो बनाउन क्लिक गर्नुहोस्
सुत्र र परम्परागत & धर्मग्रन्थहरूको, प्रकाशन गरेजस्तै, यी नवप्रकाशनहरूले पनि अधिक सद्गुण उत्पन्न गराउँछन् र दोर्जे शुग्देनको वंशावलीलाई बढ्ने कारण बनाउँछन्।
यस्ता कमिकहरू बनाइरहन हामीलाई पाउने जति सहयोगको खाँचो छ। हामी प्रकाशन खर्चहरूको लागि दयालु प्रायोजकहरूको उदार अनुदानहरूमा पूर्णरुपमा निर्भर छौँ।
यदि तपाईं प्रायोजक बनेर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ भने केचारा कमिक्स कोषका लागि जति सक्नुहुन्छ त्यति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। सहयोग गर्न वा थप जानकारीका लागि, कृपया यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्:
तपाईंको सहयोगका लागि धन्यवाद।
« Karuna Finds A Way
One Response to करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्
Samfoonheei on Oct 19, 2019 at 3:17 pm
More articles from Books & Poetry / Buddhas, Dharma & Practice / Dorje Shugden / Downloads / नेपाली